प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कहाँ र कोबाट देखे गणतन्त्र उल्टाउने प्रयास? - BBC News नेपाली
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले कहाँ र कोबाट देखे गणतन्त्र उल्टाउने प्रयास?
२६ जुन २०१९
तस्बिर स्रोत, Rajanbhattarai/facebook
प्रधानमन्त्री केपी शर्माका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जनताको असन्तुष्टिलाई 'सके (राजनीतिक) व्यवस्था नभए सरकारविरूद्ध प्रयोग' गर्न 'बाहिरका र भित्रका शक्ति सक्रिय' रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले अर्थपूर्ण लाग्ने खालको ट्वीट गर्दै लेखेका छन्,"बढ्दो जन अपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणाली, यसबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिलाई, सक्दा व्यवस्था उल्टाउने- नभए सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्ने। क-कस्लाई के कसोगरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्र बाहिरका शक्तिहरु सक्रिय रहेको अवस्था। इतिहास दोहोर्‍याउने कुचेष्टा।"
पूर्वराजालाई बारम्बार आक्रमण किन गर्छन् प्रचण्ड?
राजसंस्था राख्ने सम्झौता भएको थियो: पूर्व राजा
'हिन्दुराष्ट्र माग्नु अपराध होइन'
गणतन्त्र उल्टाउने शक्ति को?
उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "बहुदलीय व्यवस्था नै खराब, गणतन्त्र नै खराब, यहाँ धेरै छोटा राजा भए भन्ने नाममा संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने विगतकै परम्परा दोहर्‍याउन खोजिएको र सडकमा त्यस किसिमका कुरा सुनिन थालेकालाई मैले सङ्केत गरेको हुँ।"
ओलीको विकल्प: 'प्रतिक्रान्ति' कि स्वाभाविक राजनीति?
तराई, पहाड र हिमाल अखण्ड: पूर्व राजा
बढ्न पनि सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले 'त्यस्ता गलत आवाज गलत तरिका र गलत निकाय'बाट आउन नहुने बताए।
उनले ती गलत निकाय वा गलत तरिकाबारे थप खुलाउन चाहेनन्।
उनले भने, "प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका गतिविधिहरू पनि छन्, संवैधानिक मान्यताभन्दा बाहिर रहेर नारा र भनाइहरू आइरहेका छन्।"
लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त संस्थागत गरिएका विषयलाई उल्टाउन खोज्दा अन्ततोगत्वा त्यसको सहयोग प्रतिगामी शक्तिहरूलाई हुन्छ, जुन कुरा विगतमा हामीले भोगका छौँ।
विप्लवको 'सहयोग प्रतिगामीलाई'
प्रतिबन्धित दल भनेर उनले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दललाई औंल्याएको बुझिन्छ।
के चन्दको दलको गतिविधिले राजा फर्काउन चाहने शक्तिलाई नै सघाउँछ भन्ने बुझाइ हो?
भट्टराईको जवाफ छ, "उनीहरू पनि यो व्यवस्था उल्टाउन र संविधानलाई असफल बनाउन लागेका छैनन र?"
"लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त संस्थागत गरिएका विषयलाई उल्टाउन खोज्दा अन्ततोगत्वा त्यसको सहयोग प्रतिगामी शक्तिहरूलाई हुन्छ, जुन कुरा विगतमा हामीले भोगका छौँ।"
'चन्द वा मधेशी दललाई भारतले संरक्षण गर्दैन'
के सरकारले 'हिन्दू राष्ट्र' माग्नेलाई बन्देज लगाउन खोजेको हो
भट्टराईले ट्वीटमा 'क-कस्लाई के कसोगरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्र बाहिरका शक्तिहरु सक्रिय रहेको' उल्लेख गरेका छन्।
त्यसको उद्देश्य सके व्यवस्था उल्टाउने नत्र सरकारविरूद्ध प्रयोग गर्ने भन्ने उनको ट्वीटबाट बुझिन्छ।
यतिबेला सरकारलाई समर्थत फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तारूढ समाजवादी दलबीच एकीकरणको चर्चा फेरि चलेको छ।
तर उनले आफूले त्यसतर्फ सङ्केत नगरी व्यवस्था उल्टाउन खोज्ने शक्तिहरूलाई भनेको बताए।
उनले जवाफ दिए, "त्यो त तपाईँले भन्नु भयो, मैले भित्र-बाहिरका शक्तिमात्र भनेको छु। मैले भनेको मात्र बुझौँ न।"
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्वीटको अन्त्यमा 'इतिहास दोहोर्‍याउने कुचेष्टा।' भन्ने वाक्य लेखेका छन्।
उनको दल नेकपाका दुईजना अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच मतभेद देखा परेको खबरहरू आएका बेला भट्टराईले ट्वीट गर्दै इतिहास दोहर्‍याउने कुचेष्टा प्रचण्डले गरेको ठानेका हुन्?
उनले 'अनर्थ' लगाइएको भन्दै त्यो कुरा ठाडै अस्वीकार गरे।
आफूले व्यवस्था उल्टाउने प्रयासको सिलसिलामै उक्त कुरा पनि उल्लेख गरको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रपति विवादमा परेका ६ घटनाहरू कुन कुन
एकता रोक्ने र गठबन्धन तोड्ने कसरत: प्रचण्ड
एकताप्रतिको आशंकाबारे ओली-प्रचण्डको भिन्न मत
पदक वितरण विवाद कसले के भने?
१९ सेप्टेम्बर २०२१
हराएका मूर्ति स्वदेश फर्काइँदै, नेपाल ल्याएपछि कहाँ र कसरी राखिन्छन्?
'इरानका परमाणु वैज्ञानिकको हत्या रिमोट कन्ट्रोल जडित मसिन गनबाट': रिपोर्ट
अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सुरक्षा सम्झौताबारे झुट बोले फ्रान्स